Sex Education - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဖဘေု့တျသုံးနရေငျး messenger မှ စာဝငျလာသညျ…..
အမ:ညီမလေး အားလားဟငျ? အမတဈခုလောကျမေးခငျြလို့….
အမ: ညီမလေး ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောနဲ့နျော… ညီမလေးမပွောဘူးဆိုတာတော့ သိပါတယျ… ဒါပမေယျ့က ဒီတိုငျးပွောထားတာပါ …
ကြှနျမ: သွျော…ဟုတျကဲ့…ပွောပါအမ… ညီမ ဘယျသူ့ကိုမှပွနျမပွောပါဘူး…ဘာကိစ်စမို့လဲ?ဲ
(ဘာကိစ်စလဲသာမေးတာ…..တကယျတော့ ကြှနျမ ခနျ့မှနျးမိလိုကျပွီ… ဒီလောကျစကားဦးသနျးနတေယျဆိုတော့…..)
အမ : ပွောရမှာတော့ …ရှကျလညျးရှကျပါတယျ…ဒါပမေယျ့… မမေးလို့လညျးမဖွဈ….မေးစရာ ဆရာဝနျအသိ ဆိုလို့ ညီမလေးပဲရှိတာမို့… အမလေ…လှနျခဲ့တဲ့ တဈပတျလောကျက အတူနမေိသှားတယျ…အဲ့တာ ကိုယျဝနျရသှားမှာကွောကျလို့…..
ကြှနျမ: အကာအကှယျ( ကှနျဒုံး) မသုံးဘူးလားအမ?
အမ : မသုံးလိုကျဘူးညီမလေးရယျ…. အမနဲ့အမကောငျလေးကလညျး မမြှျောလငျ့ဘဲ အတူနမေိသှားတာဆိုတော့….ကှနျဒုံးလညျးမသုံးဖွဈလိုကျဘူး….အဲ…သူက ပွီးတော့ကြ….အိမျအပွနျ..ဆေးဆိုငျက ဆေးသှားဝယျပွီး ဆေး2လုံးပါတဲ့ကဒျလေးသောကျခိုငျးတယျ…အီးဇီးတူး ဆိုလား ?
ကြှနျမ: အငျး…အမ…အဲ့တာ အရေးပျေါကိုယျဝနျတားဆေးလအေမ…အတူနပွေီး 72 နာရီ (3ရကျ)အတှငျး၂လုံးစလုံးတဈခါတညျးသောကျရတာ…..
အမ:သောကျတာတော့သောကျလိုကျတယျ….ဒါပမေယျ့ အဲ့ဆေးသောကျပွီး လူကမူးပွီး ပြို့ခငျြသလိုလိုကွီး….
ကြှနျမ: ဟုတျတယျအမ….အရေးပျေါတားဆေးဆိုတော့ ပုံမှနျတားဆေးတှထေကျ ဟျောမုနျးပါဝငျတာပိုမြားလို့….. မူးဝတော၊ပြို့အနျခငျြတာမြိုးဖွဈလရှေိ့တယျ။ဆေးသောကျပွီး အနျရောအနျသေးလား အမ?
အမ: အနျတာတော့မအနျဘူးညီမလေး… တကယျလို့ ဆေးသောကျပွီး အနျရငျရော?ဆေးတှအေနျတဲ့ထဲပနျပါသှားပွီး ဆေးအာနိသငျမရှိတော့ဘူးလား?
ကြှနျမ: ဆေးသောကျပွီး ၃နာရီအတှငျးအနိတာဆိုရငျတော့ ဆေးထပျဝယျသောကျသငျ့တယျအမ…ပိုစိတျခရြအောငျလေ…ကဒျအသဈဝယျပွီး ၂လုံးထပျသောကျပေါ့… ဆေးသောကျပွီး ၃နာရီကြျောမှအနျတာဆိုရငျတော့ ထပျသောကျဖို့မလိုပါဘူးအမ။
အမ:ပွီးတော့လေ….ခုရကျပိုငျး လူက အားမရှိသလို၊မူးသလိုဖွဈနတေယျ၊ရငျသားတှလေညျးနာသလိုလို၊အစားစားခငျြစိတျလညျး သိပျမရှိဘူး။ကိုယျဝနျမြား ရှိနပွေီလားမသိဘူး ညီမလေးရယျ။
ကြှနျမ: အယျ…အမရယျ…အရမျးလညျးစိတျပူမနပေါနဲ့ဦး.. အမ အရေးပျေါတားဆေးကို သတျမှတျခြိနျအတှငျး ခပျစောစော သောကျလိုကျတာပဲ။အရေးပျေါတားဆေးရဲ့ ကိုယျဝနျတားနိုငျနှုနျးက 95%ရှိတယျ….ဆိုတော့…အမအနနေဲ့ ကိုယျဝနျရနိုငျခနြေညျးပါတယျ။ ပွီးတော့… အမကိုယျဝနျရသှားပွီဆိုရငျတောငျမှ ခုလို ခကျြခငျြးကွီး တဈပတျလောကျအတှငျး မူးဝေ အော့အနျ ရငျသားနာ စတဲ့ ကိုယျဝနျရှိတဲ့လက်ခဏာတှေ ခကျြခငျြးမပွပါဘူး အမရဲ့…
အမ:ဒါဆို အမဘာလို့ ခုတလော အဲ့လိုတှဖွေဈနတောလဲ မသိဘူးနျော….ဘာကွောငျ့ဖွဈနိုငျလဲညီမလေး?
ကြှနျမ: အကွောငျးရငျးက အဓိကအားဖွငျ့နှဈခုဖွဈနိုငျတယျ။ တဈခုကတော့ အမ အစိုးရိမျလှနျနလေို့….ခုအခွအေနကေ အမ ဘဝမှာ ပထမဆုံးအခြိနျ…လကျလညျးမထပျရသေးတဲ့အခွအေနဆေိုတော့ ရှကျတာရော…ကိုယျဝနျရသှားမှာကွောကျတာရော… စတဲ့ စိတျဖိဆီးမှုတှကွေောငျ့ အစိုးရိမျလှနျပွီးဖွဈတာ…
နောကျတဈခုကတော့ အရေးပျေါတားဆေးပေါ့…. ခုနကလေးတငျ ညီမပွောခဲ့သလိုပဲ သူကအရေးပျေါဆေးဆိုတော့ အခွားတားဆေးတှထေကျစာရငျ ဟျောမုနျးပါဝငျမှုပိုမြားလို့ ဒီလိုလက်ခဏာတှဖွေဈစနေိုငျတယျ။
အမ: အငျးနျော..ညီမလေးပွောသလို ဖွဈမှာပါ…အဲ့လိုဖွဈပါစပေဲဆုတောငျးတယျ…
ကြှနျမ: အဲ့လိုပဲဖွဈဖို့မြားပါတယျ…စိတျအေးအေးထားပါအမရဲ့.. အဆငျပွသှေားမှာပါ….တဈခုရှိတာက တကယျလို့ အမရာသီ လာရကျမှာ သှေးမပျေါဘူးဆိုရငျ ဆီးစဈတံလေးနဲ့စဈကွညျ့.. ပွီးရငျ ညီမကို တဈကွောငျးပျေါလား နှဈကွောငျးပျေါလား အဖွပွေနျပွောပေးလေ အမ…နျော..
အမ : အငျးပါ ညီမလေးရယျ…အမမှာ ညီမလေးလို မိနျးကလေးဆရာဝနျအသိမိတျဆှရှေိလို့သာ တျောတော့တယျ… ကြေးဇူးတငျပါတယျ ညီမလေးရေ…တကယျပါ။
ကြှနျမ: ရပါတယျအမရေ…ညီမလညျး ညီမတတျသိသလောကျ ပညာနဲ့ ကူညီပေးရလို့ ဝမျးသာပါတယျရှငျ့…
ဖေ့ဘုတ်သုံးနေရင်း messenger မှ စာဝင်လာသည်.....
အမ:ညီမလေး အားလားဟင်? အမတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့....
အမ: ညီမလေး ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့နော်... ညီမလေးမပြောဘူးဆိုတာတော့ သိပါတယ်... ဒါပေမယ့်က ဒီတိုင်းပြောထားတာပါ ...
ကျွန်မ: သြော်...ဟုတ်ကဲ့...ပြောပါအမ... ညီမ ဘယ်သူ့ကိုမှပြန်မပြောပါဘူး...ဘာကိစ္စမို့လဲ?ဲ
(ဘာကိစ္စလဲသာမေးတာ.....တကယ်တော့ ကျွန်မ ခန့်မှန်းမိလိုက်ပြီ... ဒီလောက်စကားဦးသန်းနေတယ်ဆိုတော့.....)
အမ : ပြောရမှာတော့ ...ရှက်လည်းရှက်ပါတယ်...ဒါပေမယ့်... မမေးလို့လည်းမဖြစ်....မေးစရာ ဆရာဝန်အသိ ဆိုလို့ ညီမလေးပဲရှိတာမို့... အမလေ...လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က အတူနေမိသွားတယ်...အဲ့တာ ကိုယ်ဝန်ရသွားမှာကြောက်လို့.....
ကျွန်မ: အကာအကွယ်( ကွန်ဒုံး) မသုံးဘူးလားအမ?
အမ : မသုံးလိုက်ဘူးညီမလေးရယ်.... အမနဲ့အမကောင်လေးကလည်း မမျှော်လင့်ဘဲ အတူနေမိသွားတာဆိုတော့....ကွန်ဒုံးလည်းမသုံးဖြစ်လိုက်ဘူး....အဲ...သူက ပြီးတော့ကျ....အိမ်အပြန်..ဆေးဆိုင်က ဆေးသွားဝယ်ပြီး ဆေး2လုံးပါတဲ့ကဒ်လေးသောက်ခိုင်းတယ်...အီးဇီးတူး ဆိုလား ?
ကျွန်မ: အင်း...အမ...အဲ့တာ အရေးပေါ်ကိုယ်ဝန်တားဆေးလေအမ...အတူနေပြီး 72 နာရီ (3ရက်)အတွင်း၂လုံးစလုံးတစ်ခါတည်းသောက်ရတာ.....
အမ:သောက်တာတော့သောက်လိုက်တယ်....ဒါပေမယ့် အဲ့ဆေးသောက်ပြီး လူကမူးပြီး ပျို့ချင်သလိုလိုကြီး....
ကျွန်မ: ဟုတ်တယ်အမ....အရေးပေါ်တားဆေးဆိုတော့ ပုံမှန်တားဆေးတွေထက် ဟော်မုန်းပါဝင်တာပိုများလို့..... မူးဝေတာ၊ပျို့အန်ချင်တာမျိုးဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ဆေးသောက်ပြီး အန်ရောအန်သေးလား အမ?
အမ: အန်တာတော့မအန်ဘူးညီမလေး... တကယ်လို့ ဆေးသောက်ပြီး အန်ရင်ရော?ဆေးတွေအန်တဲ့ထဲပန်ပါသွားပြီး ဆေးအာနိသင်မရှိတော့ဘူးလား?
ကျွန်မ: ဆေးသောက်ပြီး ၃နာရီအတွင်းအနိတာဆိုရင်တော့ ဆေးထပ်ဝယ်သောက်သင့်တယ်အမ...ပိုစိတ်ချရအောင်လေ...ကဒ်အသစ်ဝယ်ပြီး ၂လုံးထပ်သောက်ပေါ့... ဆေးသောက်ပြီး ၃နာရီကျော်မှအန်တာဆိုရင်တော့ ထပ်သောက်ဖို့မလိုပါဘူးအမ။
အမ:ပြီးတော့လေ....ခုရက်ပိုင်း လူက အားမရှိသလို၊မူးသလိုဖြစ်နေတယ်၊ရင်သားတွေလည်းနာသလိုလို၊အစားစားချင်စိတ်လည်း သိပ်မရှိဘူး။ကိုယ်ဝန်များ ရှိနေပြီလားမသိဘူး ညီမလေးရယ်။
ကျွန်မ: အယ်...အမရယ်...အရမ်းလည်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့ဦး.. အမ အရေးပေါ်တားဆေးကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ခပ်စောစော သောက်လိုက်တာပဲ။အရေးပေါ်တားဆေးရဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနိုင်နှုန်းက 95%ရှိတယ်....ဆိုတော့...အမအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေနည်းပါတယ်။ ပြီးတော့... အမကိုယ်ဝန်ရသွားပြီဆိုရင်တောင်မှ ခုလို ချက်ချင်းကြီး တစ်ပတ်လောက်အတွင်း မူးဝေ အော့အန် ရင်သားနာ စတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ ချက်ချင်းမပြပါဘူး အမရဲ့...
အမ:ဒါဆို အမဘာလို့ ခုတလော အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာလဲ မသိဘူးနော်....ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲညီမလေး?
ကျွန်မ: အကြောင်းရင်းက အဓိကအားဖြင့်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ်ခုကတော့ အမ အစိုးရိမ်လွန်နေလို့....ခုအခြေအနေက အမ ဘဝမှာ ပထမဆုံးအချိန်...လက်လည်းမထပ်ရသေးတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ ရှက်တာရော...ကိုယ်ဝန်ရသွားမှာကြောက်တာရော... စတဲ့ စိတ်ဖိဆီးမှုတွေကြောင့် အစိုးရိမ်လွန်ပြီးဖြစ်တာ...
နောက်တစ်ခုကတော့ အရေးပေါ်တားဆေးပေါ့.... ခုနကလေးတင် ညီမပြောခဲ့သလိုပဲ သူကအရေးပေါ်ဆေးဆိုတော့ အခြားတားဆေးတွေထက်စာရင် ဟော်မုန်းပါဝင်မှုပိုများလို့ ဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။
အမ: အင်းနော်..ညီမလေးပြောသလို ဖြစ်မှာပါ...အဲ့လိုဖြစ်ပါစေပဲဆုတောင်းတယ်...
ကျွန်မ: အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်...စိတ်အေးအေးထားပါအမရဲ့.. အဆင်ပြေသွားမှာပါ....တစ်ခုရှိတာက တကယ်လို့ အမရာသီ လာရက်မှာ သွေးမပေါ်ဘူးဆိုရင် ဆီးစစ်တံလေးနဲ့စစ်ကြည့်.. ပြီးရင် ညီမကို တစ်ကြောင်းပေါ်လား နှစ်ကြောင်းပေါ်လား အဖြေပြန်ပြောပေးလေ အမ...နော်..
အမ : အင်းပါ ညီမလေးရယ်...အမမှာ ညီမလေးလို မိန်းကလေးဆရာဝန်အသိမိတ်ဆွေရှိလို့သာ တော်တော့တယ်... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေးရေ...တကယ်ပါ။
ကျွန်မ: ရပါတယ်အမရေ...ညီမလည်း ညီမတတ်သိသလောက် ပညာနဲ့ ကူညီပေးရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်ရှင့်...